Compressor maka Okpomọkụ mgbapụta draya Njirimara
Izute ukwuu n'ime ina nke ugbu a ihicha ngwa, dị ka mkpụrụ & akwukwo nri ihicha anụ,
Fish ihicha, Chinese omenala na nkà mmụta ọgwụ ihicha, ụtaba ihicha & tii ihicha, osisi ihicha,
* Environment friendly refrigerant na-eji, na kwa afọ kpo oku Cop nwere ike isi nweta n'elu 4.0 via
Okpomọkụ mgbapụta ọrụ Ozizi.
* Condensing okpomọkụ nwere ike iru 90 Celsius C site Evi technology
* Ihe a na-kpomkwem nhọrọ na Ọdịdị na kachasị. E ndụ nile bụ karịa 10years
Izute na-aga n'ihu na-agba ọsọ na elu okpomọkụ ọnọdụ.
* Agbanwe ọsọ ụdị pụrụ ịchịkwa ihicha parameters kpomkwem site n'ịgbanwe ngwá na-agba ọsọ
Ọnọdụ. The ihicha ụlọ okpomọkụ nwere ike na-achịkwa n'etiti 20-85 Celsius C. Elu àgwà ihicha usoro
Nwere ike nweta.
Next: R410a Compressor maka HPWH
Ọkara hermetic Compressor C-L28M8E